Imba yekutandarira nyowani yakavhurwa kuMaputo International Airport
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Imba yekutandarira nyowani yakavhurwa kuMaputo International Airport
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Investments • Nhau Dzakanaka • Mozambique Breaking News • nhau • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Chekutanga National Bank Mozambique (FNB) uye National Aviation Services (NAS) nguva pfupi yadarika vakavhura imba yekutandarira yakasarudzika, yazvino paInternational terminal yeMaputo International Airport. Iyo FNB Lounge naPearl Assist inopa yemazuva ano, yakasarudzika nzvimbo inopa muenzi nzvimbo yakanaka yekuzorora nekuzorora, kudya kana kubata kubasa usati waenda parwendo rwavo rwemberi.
FNB Lounge naPearl Assist, yakavhurwa zviri pamutemo naGeneral João Martins de Abreu, Sachigaro uye Chief Executive Officer, Institute for Civil Aviation yeMozambique, Emanuel Chavez, Sachigaro weAeroportos de Moçambique (ADM), Paulo Pereira, Deputy Director General weFNB Mozambique naDavid Henderson, Boka Chief Commercial Officer, NAS.
Ichishandiswa neNAS Pearl Assist, imba yekutandarira yeFNB iri pafloor yekutanga yeMaputo International Airport yekumira uye inopa vatengi vePlatinum neBlack Card Limited yeFNB neFirst Rand. Kadhi vanobata vanogona kuwana imba yekutandarira nekuburitsa FNB chaiyo kana Chekutanga Randi kiredhiti kana kiredhiti kadhi uye yepasirose yekubhodhi.
Iyo 250 mativi emamirimita eFNB imba yekutandarira yakagadzirirwa neNAS, inosanganisa dhizaini repasi rose uye mamiriro enzvimbo yevaraidzo zvivakwa zvekunyaradza vese vashanyi. Iyo yekutandarira inogona kugarisa vashanyi makumi mashanu nemashanu pakukwana. Iine huwandu hwakawanda hweanopisa uye anotonhora echikafu uye sarudzo dzekunwa, yemahara Wi-Fi, nzvimbo yemabhizinesi, sarudzo yekuverenga zvinhu, nzvimbo dzekugezera pamwe nenzvimbo yekuvaraidza yevana, iyo FNB Lounge yakagadzirirwa kuve yekupedzisira mukugamuchira vaeni. .
NAS parizvino inoshandisa 31 lounges muAfrica yose, Middle East neAsia, kunhandare huru dzenyika dzakadai Kuwait, UAE, Egypt, Morocco neRwanda.
Henderson akati, “Tiri kufara kubatana neFNB kuvhura yekutanga yerudzi rwayo, imba yekutandarira yemazuva ano paMaputo International Airport. Sezvo isu tichiona kuwedzera kwekudyara kwekunze kupinda munyika, zviri kuwedzera kukosha kupa epasi rose zvivakwa kune vemuno pamwe nevekunze vafambi. Nehunyanzvi hweNAS mukutarisira imba yekutandarira, kudyara zviwanikwa uye zvikwata zvevashandi vakasarudzwa, tine chokwadi chekupa vatengi veFNB, pamwe nevamwewo vaenzi zvakanakisa maererano nerunyararo neumbozha. ”
Pereira akavimbisa kuti chinzvimbo chake chakazvipira kupfuura zvinotarisirwa neindasitiri iyi ichichinja nguva dzose.
Sekureva kwa Pereira, vashandisi vekutandarira vachapihwa mamaneja akazvipira kuti vabatsirwe uye vanogashirawo makadhi ega ega ane chipu chetsika nepini nhamba yekubatsira kubhadhara pamhepo. "Tiri kuramba tichidzidza musika weMozambique uye nekubvunza" tingakubatsira sei? ", Mukuyedza kuunza zvigadzirwa zvitsva nemhinduro kumusika weMozambique," akagumisa.
Iwo maLounges eboka reFirstRand (iro FNB Mozambique iri chikamu) atovapo munyika dzakaita seNamibia, Zambia, Botswana neSouth Africa uye zvakagadzirirwa kuve shasha mukugamuchira vaeni.
Kuvhurwa kweimba yekutandarira, chimwe chikamu chehurongwa hwekumutsiridza nekuvandudza mashandiro ebazi rezvemari kune vatengi varo, pamwe nekumisikidzwa patsva kwekambani, nerondedzero inoti "kunze kwebhanga rekare". Izvi ndizvo zvakakonzerwa nenzvimbo nyowani yeFNB Mozambique, yakanangana nekupa nyaradzo huru, nyore uye kugona, ichiwedzera kuita senzvimbo inovandudza mabhangi uye inogara yakagadzirira kugadzira mhinduro dzinosangana nezvinodiwa nevatengi vayo.